Madaxweynaha Turkiya oo Soomaaliya uga mahad celiyey maxuuse uga mahad celiyey. – Kismaayo24 News Agency
by admin 16th October 2019 024
Madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Erdogan oo ka hor hadlayey baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay inuu u mahadcelinayo Soomaaliya iyo dalalka kale ee ku taageeray howlgalka Milatari ee uu ka wado waqooyiga dalka Syria.Madaxweynaha dalka Turkiga.
Recep Erdogan oo ka hor hadlayey baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay inuu u mahadcelinayo Soomaaliya iyo dalalka kale ee ku taageeray howlgalka Milatari ee uu ka wado waqooyiga dalka Syria.
Waxaan Soomaaliya uga mahadecinayaa ina y nagu garab istaageen howlgalka militari ee aan ka wadno waqooyiga Syria.” ayuu yiri Madaxweyne Erdogan.
Maraakiib laga leeyahay Iraan, Pakistan iyo Hindiya oo si sharci darro ah ku xaalufiyey biyaha Somaliya.
SAWIRRO: Madaxweynaha Somaliya mudane Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjireyaal cusub.
Dhagayso:- Madaxweyne Xasan sheekh oo Muqdisho dib ugu laabtay Kana hadlay qaraxyadii Ruxay Muqdisho& Jabuuti
Xasan Kheyre oo loo diiday booqashada Xaruumaha qaar ee Waqooyiga Gaalkacyo.